Zvigadzirwa Service | Tsika Zvigadzirwa Service & Mugadziri
Vashandi vegungano vane hunyanzvi vari kuita gungano rezvigadzirwa zvakapedzwa. Iyo yakazara yekugadzira kugadzira ndeye Dhizaini-CNC laser yekucheka / murazvo Kucheka / kutsika-kugadzira / kukotama-CNC machining -kuchinjisa-pamusoro kurapwa-gungano Hengli ine ruzivo uye mukana wekushanda nevatengi vari kutsvaga kuratidzira chikamu. Isu tinotora kudada kukuru kwete chete mukuzvipira kwedu kune mhando, asi zvakare yedu track rekodhi yekupa inoshanda uye yakavimbika ekugadzira masevhisi kune vatengi vedu. Yedu empha ...
Yedu Logistic Center yakavambwa mukupera kwegore ra2014, vangangoita makumi mashanu evashandi, vachishandisa ERP ruzivo rwetekinoroji uye barcode manejimendi kuve nechokwadi cheiyo zvigadzirwa zvekuchengetedza. Automated inventory masystem anoshanda nekutarisa barcode pane izvo zvikamu. A barcode scanner inoshandiswa kuverenga barcode, uye ruzivo rwakanyorwa nebarcode runoverengwa nemuchina. Ruzivo urwu runoteverwa nepakati computer system. Semuenzaniso, odha yekutenga inogona kunge iine runyorwa rwezvinhu zvinofanirwa kudhonzwa ...
Yedu Welding Workshop inopa simbi mamiriro ekugadzira uye chaiyo pepa simbi nhema. Zvigadziriso zvine 160, kusanganisira mamwe ma welders epamusoro ane TUV EN287 / ASME IX chitupa, anodarika makumi masere ePanasonic MAG michina uye gumi nemashanu TIG michina. 20 marobhoti ekutengesa kubva kuKuka nePanasonic. ISO 3834 yakasimbiswa muna 2018. Mupi wezvakanaka pepa simbi yekugadzira masevhisi kubvira 2002, Hengli Metal Kugadziriswa inopa vatengi mutengo unodhura ekugadzirisa mhinduro nekubatanidza mashandisiro edu adva ...
Kugadzira kwaHengli kunoshandisa CNC michina yeplasma. Plasma yekucheka tekinoroji inotigonesa kucheka simbi neukobvu hwe 1… 350 mm. Yedu plasma yekucheka sevhisheni inoenderana nehunhu kupatsanura EN 9013. Plasma kucheka, senge murazvo kucheka, inokodzera kucheka gobvu zvinhu. Kubatsira kwayo pamusoro peiyo yekupedzisira mukana wekutema zvimwe simbi uye maalloys ayo asingakwanisike nekucheka murazvo. Zvakare, iyo inomhanya inomhanya zvakanyanya kupfuura nekucheka murazvo uye hapana chikonzero ...
Yedu yekupenda mashandiro akavakirwa pane yakasimbiswa ISO 9001: 2015 Quality Management Systems. Isu tinopa yakakwira-ku-zuva semi automated yakanyorova pendi sevhisi, iyo inosanganisira yepamhepo makemikari etching nzvimbo, yakaoma nzvimbo, yemazuva ano electrostatic spray dumba uye yakakura saizi maindasitiri hovhoni. Kazhinji tinopenda irwo rudzi rwezvinhu zvinotevera: zvikamu zvemuchina weindasitiri, zvikamu zvemuchina wekurima, zvikamu zvemuchina wekuvaka nezvimwe. Yedu nyoro pendi nyanzvi dzinoendesa mhando, inodhura po ...